Stack Ball - Blast through platforms 1.0.37 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.37 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု Stack Ball - Blast through platforms
Stack Ball - Blast through platforms ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Stack Ball ကို ကစားသမားတပ်များဝင်တိုးနှင့်အဆုံးရောက်ရန် helix ပလက်ဖောင်းဆုံလည်မှတဆင့် bounce ဘယ်မှာ 3d Arcade ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်ကူသောအသံ? သငျသညျ !! ဆန္ဒရှိ
သင့်ရဲ့ဘောလုံးက၎င်း၏နွယ်ဖွားပိတ်ဆို့ကြောင်းရောင်စုံ platform များမှတဆင့်တစ်ဦးအုတ်နှင့်တူချိုးပြီ, ဒါပေမယ့်သင်ကအနက်ရောင်တဦးတည်းထိမှန်လျှင်, အားလုံးကျော်ပဲ! သင့်ရဲ့ဘောလုံးအပိုင်းပိုင်းချိုး ဖျက်. သင်တို့ရှိသမျှကိုကျော်နောက်တဖန်သင်ပြိုလဲစတင်ရန်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ပင်အနက်ရောင်ပလက်ဖောင်းအပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာကျဆင်းနေတဲ့ရောင်စုံကိရိယာများအတွက်မယှဉ်များမှာ! သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ပါ: တစ်အရူးနဲ့တူအရှိန်မြှင့်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်လှိမ့်နဲ့ခုန်မှသင်၏နောက်အခွင့်အလမ်းများအတွက်စောင့်ပါ။ အခွားသောဘောလုံးကိုဂိမ်းများကိုသူတို့ကဒီပျော်စရာခဲ့ကြသည်ဆန္ဒရှိ!
အဘယ်ကြောင့် Stack Ball ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို :
- Crazy အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်း
Stack Ball - Blast through platforms အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Stack Ball - Blast through platforms အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Stack Ball - Blast through platforms အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Stack Ball - Blast through platforms အား အခ်က္ျပပါ
mr-robot-games စတိုး 3.61k 5.27M
Stack Ball - Blast through platforms ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Stack Ball - Blast through platforms အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.0.37
ထုတ်လုပ်သူ AI GAMES FZ
Release date: 2019-05-09 01:04:30
လက်မှတ် SHA1: E5:44:82:FC:C9:D1:07:DC:D6:33:54:B2:78:25:3F:DB:8A:DB:B0:7F
Stack Ball - Blast through platforms APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ